Fametrahana tranokala sy fifandraisana am-pahamendrehana avy amin'ny manam-pahaizana Semalt Ivan Konovalov
Namaritra ny fanontana: Ivan Konovalov no mpitantana ny fahombiazan'ny mpanjifa ao Semalt. Ny orinasa dia manana mpanjifa maherin'ny 10 000 mahomby ary mandroso hatrany amin'ny teknolojia tsara indrindra.
Ny fitaovam-pikarohana dia manao asa tsara kokoa amin'ny tranonkala avo lenta kokoa izay manan-danja kokoa amin'ny fikarohana ny mpitsidika - backlinks sitesi.
Rehefa mandefa fitaovam-pikarohana toy ny 60 isan-jaton'ny fifamoivoizana maimaimpoana mankany amin'ny tranokalanao, dia tsy misy antony tokony hanorenana rohy mankany amin'ny tranonkalanao ary ankafizo ity malalaka fifamoivoizana.
Ny lohahevitra momba ny fananganana rohy dia tena goavana tokoa, ary hianatra izany amin'ny fotoana ianao ary mbola manohy manandrana.
Na izany aza dia misy ny fampahalalana sasantsasany izay tena ilaina mba hianaranao hanomboka sy hisorohana ireo tranga miavaka kokoa.
Nahoana no zava-dehibe ny trano fonenana
Raha te haka tahaka zavatra toy ny vata fampangatsiahana ianao, inona no hataonao amin'ny tranga toy izany?
Azonao atao angamba ny mahita fivarotana iray ahafahanao mividy ny vokatra, na izany na amin'ny alalan'ny aterineto na amin'ny mpivarotra an-tserasera.
Ny hany fomba ahafahanao mankany amin'ny toeram-pivarotana iray ary hividy ny vata fampangatsiahana iray tsy misy mangataka olona ho an'ny fanolorana azy dia rehefa fantatrao ny fomba handraisana fanapahan-kevitra fantatra.
Mifidy safidy ianao mifototra amin'ny traikefanao, ny safidinao, na mety amin'ny alalan'ny fanolorana avy amin'ny namana na olona ao amin'ny fianakaviana. Na izany aza, raha mividy milina fanadiovana voalohany ianao eo amin'ny fiainanao, ary te hanapa-kevitra ianao, inona no hataonao? Azo inoana fa hitady toro-hevitra avy amin'ny olona iray mahay mamaky kamiao iray ianao. Hatoky ny didim-pitsaran'io olona io ianao ary hifindra amin'ny fividiananao, sa tsy izany?
Ny tranonkala World Wide dia toerana goavana. Raha mila mamaly ny fangatahan'ny mpitsidika ny motera fikarohana, dia mijery ny tranonkala izy ireo mba hahitana valiny mifandraika amin'izany. Koa satria maro ny tranonkala afaka manolotra fampahalalana tahaka izany, dia sarotra ho an'ireo milina fikarohana ny mametraka ny toerana tsara indrindra amin'ny lamin'ny valin'ny fikarohana. Amin'ny tranga toy izany dia manampy ny rohy.
Aleo lazaina fa manana tranonkala iray misy anao ianao izay manome tolotra ho an'ny fandefasana tapakila sy trano ipetrahana amin'ny hotely isan-karazany manerana ny firenenao. Ankehitriny, raha manana rohy mankany amin'ny tranonkalanao ianao avy amin'ireo orinasan-tserasera na haingam-piaramanidina lehibe, dia hitondra soa ho an'ny tranonkalanao izany ary hanampy anao hahazoana mari-pahaizana ambony kokoa amin'ny SERPs (pejin-kaonty Search Engine) raha ampitahaina amin'ireo tranonkala hafa mitovy amin'ny ny anao. Ny rohy dia mitovy amin'ny fitokisana..
Raha toa ny tranonkala roa mitovy amin'ny votoaty, ny iray izay nahazo ny ambony indrindra dia ilay tranonkala izay nahatonga ny fitokisana indrindra tamin'ireo motera fikarohana .
Rehefa mamorona rohy mankany amin'ny tranokala hafa ianao dia mizara traikefa ary mifampatoky amin'ny foto-kevitrao. Fikarohana karazana fitiavana mifandray.
Ny rohy mankany ivelany
Ny rohy mankany anatiny dia ireo rohy izay tafiditra avy amin'ny tranonkala hafa, raha toa kosa ny rohy mandroso dia mandefa ireo izay mandefa vahiny avy amin'ny tranonkalanao mankany amin'ny tranonkala hafa.
Ny rohy mankany amin'ny aterineto dia mampiseho ny habetsahan'ny tranokala hafa matoky anao ary ny rohy nivoaka any ivelany dia mampiseho ny habetsaky ny fitokisana napetrakao amin'ny tranokala hafa .
Ny kalitao dia zava-dehibe foana amin'ny olona, ​​ary zavatra iray ihany koa ny lanjan'ny motera fikarohana.
Ny tanjon'izy ireo dia ny manolotra ny valiny mahaliana sy manan-danja amin'ny fangatahan'ireo mpampiasa azy rehefa manapaka ny tsimparifary na ny mpanelanelana amin'ny bunch.
Midika izany fa azony antoka fa mahazo ny vokatra tsara avy amin'ny toerana mety ianao amin'ny fotoana rehetra.
Inona no atao hoe kalitao fifandraisana?
Ity dia lafiny manan-danja izay manampy ireo fitaovana fitadiavana hamaritra ny kalitao sy ny fahamendrehan'ny tranonkala iray.
Rehefa manorina rohy amin'ny tranokalanao ianao, dia zava-dehibe ny hahatongavan'izy ireo azo itokisana sy toerana avo avo lenta.
Satria misy tranokala tsy misy fiafarana amin'ny lohahevitra nomena ho an'ny tranonkalanao mba hampifandraisina sy hanomezana rohy ho an'ny fiverenana, ary amin'ny farany dia mahazo ny laharana ambony amin'ny pejy valin'ny fikarohana, dia zava-dehibe fa ireo tranonkala ireo dia avy amin'ny tranonkala ambony indrindra amin'ny nomena sokajy.
Ny rohy Semalta avy amin'ireo tranonkala avo lenta dia famantarana fa matoky anao ireo tranonkala toy izany ary ireo rohy tonga dia manambara ireo fitaovan'ny fikarohana fa ny tranonkala dia mety hanana zavatra ilaina ihany koa ho an'ny mpanjifa mijery.
Ity no karazana toro-hevitra tokony hokatsahinao amin'ny fividianana vata fampangatsiahana, araka izay noresahina tetsy ambony.
Aminao fotsiny ny fanolorana hevitra momba ny lohahevitra iray ataon'ny olona iray izay manana fahefana amin'izany lohahevitra izany.
Ny rohy ankamantatra avo lenta kokoa izay azonao atao mba hahatongavana any amin'ny tranokalanao dia ho tsara kokoa ny lanjanao!